Ukurhafisa simahla kwaye kulula ngeWireframe.cc | Martech Zone
Ukurhafisa simahla kwaye kulula ngeWireframe.cc
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 4, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 4, 2013 Douglas Karr
Mhlawumbi kuya kufuneka siqale ngantoni na? Ukwenza ucingo yindlela yokuyila ngokukhawuleza ukubonisa ubume bamathambo kwiphepha. Iifayile zefayile zibonisa izinto ezikweli phepha kunye nobudlelwane bazo, azibonisi uyilo lwegraphic lwangempela olufakiwe. Ukuba ufuna ngenene ukwenza umyili wakho onwabe, babonelele ngegama lefowuni yesicelo sakho!
Abantu basebenzisa yonke into ukusuka kwipeni kunye nephepha, ukuya kwiMicrosoft Word, ukuya kwi ukusebenzisana phambili kwezicelo zocingo ukuyila kunye nokwabelana ngeefowuni zocingo. Sisoloko sijonge izixhobo ezikhulu kwaye kubonakala ngathi ngumphuhlisi wethu, UStephen Coley, Ndifumene enkulu encinci esimahla ukuyisebenzisa - Ifayile yocingo.cc
I-Wireframe.cc inezi zinto zilandelayo
Cofa uze utsale ukuzoba -Ukudala izinto zegama lefowuni yakho akunakuba lula. Konke okufuneka ukwenze kukuzoba uxande kwilaphu kwaye ukhethe uhlobo lwe-stencil oluya kufakwa apho. Unokwenza oko ngokutsala imouse yakho kwinqanawa kwaye ukhethe ukhetho kwimenyu ephumayo. Ukuba ufuna ukuhlela nantoni na cofa kuyo kabini.
Ujongano oluphezulu kakhulu -Endaweni yeebar zesixhobo ezingenakubalwa kunye nee icon sonke esizaziyo kwezinye izixhobo kunye neeapps iWireframe.cc ibonelela ngendawo engenazinto. Ngoku ungagxila kwizimvo zakho kwaye uzizobe ngokulula ngaphambi kokuba ziphele.
Chaza ngokulula -Ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba umyalezo wakho uyagqitha ungahlala uphawula kwifayile yakho yocingo. Izichazi-magama zenziwe ngendlela efanayo nazo naziphi na ezinye izinto ezikwi-canvas kwaye zinokuvulwa zicinywe.
Iphalethi encinci -Ukuba ufuna ukuba iifowuni zecingo zakho zihluthe kwaye zicace gca kufuneka uzigcine zilula. I-Wireframe.cc inokukunceda ukufezekisa oko ngokunika iphalethi enomda kakhulu kukhetho. Oko kusebenza kwiphalethi yombala kunye nenani leepensile onokukhetha kuzo. Ngale ndlela intsingiselo yengcinga yakho ayisayi kulahleka kwimhombiso engeyomfuneko kunye nezitayile ezintle. Endaweni yokuba uza kufumana i-wireframe ngokucaca kwesiketshi esitsalwe ngesandla.
Iingcebiso ze-Smart - Ifayile yocingo.cc izama ukuthelekelela ukuba uza kuzoba ntoni. Ukuba uqalile ukuzoba into ebanzi kwaye ebhityileyo kusenokwenzeka ukuba ibe sisihloko esiyintloko kunokuba ibe siscrollbar esime nkqo okanye isangqa, ke ngoko, imenyu yokuzivelelayo iya kuba neempawu kuphela zezinto ezinokuthatha obu bume. Kukwanjalo nokuhlela-uziswa kuphela kukhetho olusebenzayo kwinto enikiweyo. Oko kuthetha ukuba ii-icon ezahlukeneyo kwibar yesixhobo yokuhlela umhlathi kunye nokwahluka koxande olulula.
Iiwebhsayithi ze-Wireframe kunye neefowuni zokusebenza -Ungakhetha kwiitemplate ezimbini: iwindow yokukhangela kunye nefowuni ephathekayo. Inguqulelo yeselfowuni iza ngokuthe nkqo kunye nokuma komhlaba. Ukutshintsha phakathi kweetemplate ungasebenzisa i icon kwikona ephezulu ngasekhohlo okanye wenze ubungakanani kwakhona kwinqanawa usebenzisa isiphatho kwikona yayo esezantsi ngasekunene.
Kulula ukwabelana kunye nokuguqula -Igama lefowuni nganye oligcinayo lifumana i-URL eyahlukileyo onokuthi uyenze ibhukumaka okanye wabelane ngayo. Uyakwazi ukuphinda usebenze kuyilo lwakho nangaliphi na ixesha kwixa elizayo. Yonke into yefayile yakho yocingo inokuhlelwa okanye iguqulwe ibe yenye into (umz. Ibhokisi inokujikwa ibe ngumhlathi).
tags: ii-saaskuyilo webizixhobo zoyilo lwewebhuifayileizixhobo zefowuniucingoizixhobo zokucoca ucingo
I-ToutApp: UkuKhangela ukuThengisa, iiTemplate kunye noHlaziyo
Ukunyaniseka: Ulawulo lweMithombo yeendaba kwiNtlalo